“सामाजिक सेवा पथका यात्री वेदप्रसाद गौडेल”
By vijayafm on	 November 12, 2019 कोरोना अपडेट, देश, धर्मसंस्कृति, फोटो फिचर, स्थानीय, स्थानीय तह
कार्तिक २६, गैंडाकोट । “सामाजिक सेवा पथका यात्री वेदप्रसाद गौडेल” कृति गैंडाकोटमा लोकार्पण गरिएको छ । गौडेल निवास गैंडाकोट २ भृकुटीचोक नजिकै मंगलबार वैकुष्ठ पूर्णिमाका दिन विविध वैदिक अनुष्ठान सहित लक्ष्यवर्ती यज्ञ पश्चात श्री हरिहर संन्यास आश्रम तथा परमानन्द संस्कृत गुरुकुलम देवघाटधाम तनहुँका पिठाधिश एवं नेपाल सन्त समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री १००८ स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजज्यूले कृति लोकर्पण गर्नुभएको हो । सो अवसरमा उहाँले धर्मपूर्वक आर्जित सम्पत्ती सत्य हुने जनाउँदै धर्म, सस्ंकृति, मातापिता, गुरुदेव र राष्ट्रलाई कहिल्यै भुल्न नहुने बताउनुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका उहाँले सम्पत्ती भन्दा पनि संस्कारको धनी बन्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सनातन वैदिक धर्मको रक्षा गरियो भन्ने कहिल्यै दुःखी हुन नपर्ने उहाँको भनाई छ ।
कालिगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा डाईभर्सन गर्नु खोजिनु दुर्भाग्य भएको बताउँदै हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्रलाई खोलामा परिणत गर्न खोजिनुको परिणत नराम्रो हुने चेतावनी दिनुभयो । राजनीतिको आधारमा गल्ती नगर्न सचेत गराउँदै उहाँले राष्ट्र सञ्चालकहरुले विकास गर्छु भनेर विनास गर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले वेदप्रसाद गौडेलले सामाजिक विकासमा पु¥याएको योगदान अतुलनिय रहेको उल्लेख गर्दै यस कृतिले नेपाली समाजलाई धर्मचरणपुर्वक आफ्ना कर्तव्यपथमा सतत क्रियाशिल रही वैयक्तिक, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्व वहन गर्ने संस्कारको अभिवृद्धि गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली, पुर्व सांसद शारदा पौडेल, पुर्व सांसद कृष्ण पौडेल, पुर्व न्यायधिश बालचन्द्र शर्मा पौडेल, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघका केन्द्रीय सदस्य तिलकप्रसाद सापकोटा, गैंडाकोट नगरपालिकाका उप प्रमुख विष्णुकमारी कंडेल, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष ओमप्रसाद सापकोटा लगायत स्थानीय तथा जिल्ला तहका नेताहरु, जनप्रतिनिधीहरु, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
कृतिमाथी समिक्षा गर्दै त्रिवेणी साहित्य परिषद्का अध्यक्ष प्रा.डा. नारायणप्रसाद खनालले गौडेलका ६३ वर्ष लामो जीवनयात्रा र समाजसेवा – राष्ट्रसेवाको एक लघु दर्पणका रुपमा तयार भएको उल्लेख गर्दै यस पुस्तकबाट प्रर्याप्त लाभ लिन सकिने उल्लेख गर्नुभयो । २८० पृष्ठमा प्रकाशित कृतिमा गौडेलका जन्मदेखी हालसम्मका योगदान, गौडेलका लेखहरु, विविध व्यक्तित्वका आलेखहरु समावेश गरिएका छन् ।
कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै ग्रन्थ नायक वेदप्रसाद गौडेलले त्रिवेणी साहित्य परिषद् लगायत समुदायका हरेक व्यक्तिले लगाएको गुन कहिल्यै नविर्सने बताउनुभयो । सो अवसरमा वेदप्रसाद गौडेल एवम् उहाँकी धर्मपत्नी एवम् कृतिका संरक्षक टीकादेवी गौडेललाई विभिन्न संघसंस्थाले सम्मान प्रकट गरेका थिए ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवम् कृति सम्पादन समितिका संयोजक, कविवर गोविन्दराज विनोदीले कृति निकै उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै समाजमा गरेका कामलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
त्रिवेणी साहित्य परिषद्ले आफ्नो ९५ औं कृतिका रुपमा यो कृति १००१ प्रति प्रकाशनमा ल्याएको हो । २०४७ सालमा स्थापित परिषद्ले जिल्लाको साहित्यिक यात्रालाई हराभरा बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।
२०१४ सालमा पर्वत मुडिकुवामा जन्मनुभएका गौडेल विजय सामुदायिक सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लि. (विजय एफएम १०१.६÷विजय खबर पत्रिका) का लेखा समिति संयोजकसँगै २७ वटा संस्थामा आजिवन सदस्य, ६५ वटा संघ संस्थामा हालपनि आवद्ध र ४८ वढि संघ संस्थामा सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ । वेदप्रसाद गौडेल यसअघि साविक गैंडाकोट, अमरापुरी गाविसको पुर्व अध्यक्ष एवम् सचिव हुनुहुन्थ्यो ।